Col. Cabdullahi oo Caalamku ka sugayey Iscasilaad oo dib isku Caleemo saaray
Buluugleey, Saturday, October 15, 2005
Waxaa xalay magaalada Jowhar ka dhacday xaflad lagu xusayo maalintii Col. Cabdullahi Yusuf lagu dhaariyey Garoonka Kazaraani ee magaalada Nayroobi. Xafladdaas waxaa ka soo qeybgalay ehelediisa gaarkaa iyo koox yar oo ka tirsan taageerayaasha siyaasadiisa ee garabka Jowhar. Sidoo kale waxaa ka soo qeybgalay wakiilo ka socdey Safaaradaha dalalka Yemen, Shiinaha iyo Talyaaniga u fadhiya dalka Kenya. Waxaa Col. Cabdullahi ku soo dhaweeyey inuu xaflada qudbad ka jeediyo mudane Max’ed Cabdi Xayir Maareeye oo ku hadlay afka Garabka Jowhar oo ah qeyb ka mida xukuumada lagu soo dhisay dalka Kenya.
Col. Cabdullahi oo xafladaas ka jeediyey khudbad dheer ayaa ka hadlay guuldarada ay ku soo gudbeen sannadkii la soo dhaafay, waxaana hadalkiisa ka mid ahaa inaan aqoon iyo jaceyl midna loogu dooran xilkaas ee qalbi adkaan iyo xoog wax ku dirqin ay ahayd mida sababtay in xilkaas loo dhiibo.
Col. Cabdullahi waxaa xilkaas Kenya loogu doortay 10kii Oktoobar sannadkii 2004. waxaa korneylka lagula taliyey maalintaas iney tahay maalin nasiibdaran sidaas daradeedna uu ka wareejiyo maalintaas xuska caleemo saarkiisa. Waxaana qiyaas ahaan u soo baxday maalintii dhaarta oo sida rasmiga ah uu u qabsaday xilkaas. Waxaana saadaaal lagu siiyey in wax badan ay u qabsoomayaan haddii uu 14ka Oktoobar ku bedelo 10ka Oktoobar. Isagoo dardaarankaas ka dhabeynaya ayuu Col. Cabdullahi ku sifeeyey maalinta 14ka Oktoobar iney tahay maalin barakeysan, isagoo qiil uga dhigay iney ku kulmeen Ramadaan iyo roobab badan oo u da’ay Soomaalida.
Waxey dad badan oo Soomaaliyeed iyo dalal badan ay ka sugayeen Col. Cabdullahi inuu ka dhabeeyo dhaartiisii ahayd inuu xilka isaga degayo haddii uu ku guuldareysto dhismaha dowlad Soomaaliida dib u heshiisiin ka dhalisa. Arrintii laga filayey inuu ku dhowaaqo wuxuu bedelkeeda geliyey xagsashada afarta sanno oo u hartay ineysan ka gelin muran iyo sibiqsibiq. Xafladaha caleemo saarka lagu xusayo ayaa lagu tilmaamaa iney ka mid yihiin dhaqamada laga soo tegey oo ay ku soo can baxeen madaxda beelaha iyo keliteliyeyaasha jecel iney ka khudbeeyaan xafladaha ay isugu damaashaadayaan.
Col. Cabdullahi waxaa u muuqata inuusan ku guulaysan karin hogaaminta Ummadda Soomaaliyeed. Wuxuu dhumiyey fursadihii uu xilka ku yimid oo kala ahaa inuu nabadgelyo kula heshiiyo dagaaloogayaasha uu isagu ka midka yahay iyo nidaamka dib u heshiisiinta iyo is aaminida oo dalka dib looga hirgeliyo. Cabdullahi wuxuu labadaas fursadood ku waayey shaqsiyadiisa wajigeeda dagaal doonkaa oo ka xoog badatay qeybta sharafta iyo xukun doonkaa.
Col. Cabdullahi wuxuu bishii Luuliyo warqad qoraala u qoray Qaramada Midoobey Golaheeda Amaanka, wuxuuna codsaday in cunaqabateynta Soomaliya ka saran xagga hubka la qafiifiyo oo garabkiisa loo ogolaado iney dalka soo geliyaan cidamo shisheeye iyo hub. Warqadaas ayaa waxey ka turjuntey damcigiisa xooga ku dhisan iyo garasha la’aanta ninkaas ka heysata xilka loo doortay ee dib u heshiisiinta. Golaha Amaanka ayaa soo siiyey jawaab ah inaan dalka Soomaliya waqtigan la joogo aan la keeni karin ciidamo shisheeye, kuwaas oo dalka u horseedaya colaado culus. Cabdullahi isagoon fahmin fariinta Golaha Amaanka ayuu bishii September wuxuu hor dhigay Golaha Guud ee Qaramada Midoobey in Soomaaliya loo fasaxo hub iyo keenista ciidamo shisheeye. Golaha Amaanka oo hadda ka dheregsan ujeedada dagaalooganimo ee uu damacsan yahay Col. Cabdullahi ayaa bishan Oktoobar xilli uu korneylku isku diyaarinayo caleemo saarkiisa waxey soo saareen arrin kama dambeysa oo khuusineysa Col. Cabdullahi, digniina u ah Itoobiya iyo Yemen.
Golaha Amaanka ayaa Bulshada Caalamka u dirtay inaan la aqbali karin dadaalka uu Col. Cabdullahi ugu jiro dagaal uu doonayo inuu ka rido Muqdisho, waxeyna fariimo gaara u dirtay Itoobiya iyo Yemen iney ka joogsadaan hubka ay ku daldalayaan garabka Jowhar.
Col. Cabdullahi ayaa tan iyo inta xilka loo doortay wuxuu dadaalkiisa isugu geeyey sidii uu dalka u soo gelin lahaa Ciidamo shisheeye, deeq caalamkana uu uga heli lahaa in dalka dagaal lagu xukumo. Fariinta ay Golaha Amaanku ku soo beegeen xusida maalinta caleemo saarkiisa ayaa dadaalkiisaas ka dhigtay midaan waxba ka jirin oo aysan waxba ka soconeyn.
Wuxuu sannadkaas Col. Cabullahi uu ku guuleystey inuu qabsado: magaalada Jowhar oo uu ka sameystay dhufeys, maleeshiyooyin uu ka soo ka xeystay gobolka Bari, hub fara badan oo uu ka keensady Itoobiya iyo Yemen, khilaaf xoogan oo uu dhexdhigay qabqablayaashii soo doortay, iyo garabka Jowhar oo sii kala jeedinayo.
Waxaa su’aal ay ka taagan tahay sababta Prof. Geedi iyo Maxamed Dheere kulansiiyey iney ka maagaan imaanshaha xafladaas. Waxaa loo maleynayaa in Geedi uu soo gudbiyo iscasilaadiiisa haddii Cabdullahi uusan wax weyn ka bedelin siyaasadiisa dagaalka. Sidoo kale labadaas nin waxaa dhexyaala siyaasad ah in labakacleyn lagu dayo dowladii lagu soo dhisay Kenya iyadoo ay adkaatay dib u magacaabid macno sameyn karta haddii xilka laga qaado wasiirada gadoodey. La tashiyada ay garabkaas la sameeyeen deeq bixiyeyaasha iyo wakiilada shisheeye ee daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa looga digey ineysan khilaafka sii murugeyn.
Sidoo kale Maxamed Dheere ayaa dib loogu soo celiyey Jowhar, iyadoo qorshuhu uu ahaa inuu u duulo dalka mareykanka. Ma cadda in sababta uu u aadi waayey ay la xiriirto khilaaf jira ama in dalka Mareykanka uu ka gaabsaday socdaalkaas kadib marka ay soo baxday warbixintii Golaha Amaanka oo dhaleeceeyey Col. Cabdullahi iyo dalalka Itoobiya iyo Yemen ee ku dhiirogelinaya dagaalka.
Col. Cabdullahi mariinka keliya ee u furan waa isaga oo iska casila xilka uu sheeganayo mar haddii siyaasadiisa ay si wada jira ay uga soo horjeesteen wadama bixiya deeqda iyo Qaramada Midoobeyba. Isbedel Siyaasadeed oo uu hadda la yimaado oo dib u heshiisiina ma aha mid keeni karta xal madaama ay adag tahay inuu noqdo nin lagu kalsoonaan karo ama lagu aamini karo shaqsiyadiisa oo ay ku gaamurtey dagaal iyo qabiil u xaglin. Khudbadii uu ka jeediyey xaflada ayaa gebi ahaanba ahayd mid laga dareemayo rajo beel iyo iyadoo muujineysey iney gacantiisa ka baxday awoodii siyaasadeed oo uu horay ugu abuuray caqabadaha iyo turaanturooyinka uu ku gudbay nidaamkii lagu raadinayey dib u heshiisiinta. Rajada wanaagsan ee laga sugayey waxey ahyd haddii uu waxba qaban waayey inuu soo jeediyo tanaasulka keliya oo u furnaa, runtiina wax weyn u noqon lahaa, kaas oo ah inuu iska dhiibo xilka uu ku guuldareystay. Maxaa yeelay, siyaasadiisu waa wax aan xiligaan ka socon karin dalka Soomaaliya, shacabka Soomaaliduna ay ka rajo dhigeen.